ထိုင်းကိုနိုင်ဖို့ အူးခြစို့ U23 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Aha! Jokes, Satire » ထိုင်းကိုနိုင်ဖို့ အူးခြစို့ U23	43
ထိုင်းကိုနိုင်ဖို့ အူးခြစို့ U23
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jun 14, 2015 in Aha! Jokes, Satire, Community & Society | 43 comments
ဆိတ်ညစ်တယ်ဗျာ.. မြန်တျန့်ပြည်အရေး မြင်ကြားသိ နေရဒါ အချိုးမပြေ..။ နောက်ဆုံးတော့မာမွတ်ခိုမ် ပြောတဲ့ ဘာသာအရောင်ဆိုး ထုံးတမ်းဓလေ့ ကိုပဲ အပြစ်တင်ရမည်။ သူ့ဟာသူနေတဲ့ ဘာသာတရားကို ကာလံဒေသံ အရောင်တွေဆိုး.. ကြာတော့အဟုတ်ထင်.. နောက်တော့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဖြစ်ရော။ မှားတယ် မှန်တယ် ပုံသေမရှိလို့ အယင်မှန်ခဲ့တာ မှန်ချဉ်လည်း ဆက်မှန်မည်၊ မှန်ခြင်မှလည်း ဆက်မှန်မည်။ တရားသေ ဆုပ်ကိုင်ဖို့မသင့်..။
ခေတ်ကပြောင်းနေပြီ..။ မြန်တျန့်တွေ ကျန်နေရစ်လို့ သူ့ကျွန် ဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီ။ သခင်ကြီးတွေ ကမ္ဘာမှာ နယ်ချဲ့ ကိုလိုနီ ကျွန်ပြုတာ အားမရလို့ အာကသာထဲ ခြေဆန့်နေပြီ။ မလိုတာတွေ စွန့်ပစ်.. အကာကိုဖယ် အနှစ်ကိုယူမှ ဒင်းရို့နောက် အမှီလိုက်နိုင်မည်။ ဒါနဲ့စပ်လို့ ကိုမိုးသီးပို့စ်တခု catပတိန် မေယီးကား ရှယ်ထားတာလေး ပြောချဉ်တယ်။ အတိုချုပ်က အနောက်တိုင်းမှာ ဖျားသခင်ကို ခွစ်ယံကျောင်းတော်နဲ့ ပြည်သူ အပြိုင်လုတာ လူတွေနိုင်လို့ ခေတ်ပြောင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ မာမွတ်တို့ တိုင်းပြည်တွေမှ မူလာဂျီးတွေ အပိုင်ဆီးထးလို့ ဒုက္ခပင်လယ်ဝေတယ်။ အရေးကြီးတာ ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်မတင်၊ ကိုယ့်အပြစ်ကို မြင်အောင်ကြည့်… ဘာတွေမှားနေလဲ.. ။ အဓိကခေါင်ကိုပစ်… ဒိုင်းညှောင့်..။ မြန်တျန့်ပြည်လည်း မာမွတ်တို့လမ်းစဉ် လိုက်နေပြီ… သူတို့လို့ ရေနံထွက်မည် မထင်နဲ့….. အလုံးစုံ ပျက်သုန်းတော့ မှာ။
ပို့စ်ရေးဖြစ်ရဂျင်း အကြောင်းက ဆီးဂိမ်း U23 ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာ ဗီယက်နမ်ကို မြန်တျန့် နိုင်လို့ ပွဲအပီး အောင်ဗွဲခံတော့ကျေးဇူးရှင်လေးအချို့ ဘာလှုပ်တယ် မှတ်သလဲ..။ ပွဲကြည့်စင်ရှေ့သွား ငုပ်တုပ်ထိုင် အူးခြသဗျာ။ မြင်ဂွင်းကြည့်ပီး အတော့ရှော့ ခ်ရသွားတယ်။ ဘာကြောင့် အဲလို လုပ်သလဲ။ ပိတ်သတ်ကို မိဘသဖွယ် ခြစ်လို့မဟုတ်တန်ရာ.. ဓလေ့ ထုံးစံကြောင့် ဆိုငြင်းမလား..။ အနုပညာရှင်တွေ စနက် မကင်းလို့ မြင်တယ်။ အင်တာဗူးတွေမှာ မင်းဓါး၊ မင်းတမီးတွေ ရုပ်ရှင်ပိတ်သက်ကို ထမင်းရှင်၊ ကျေးဇူးတင် စဂါးတွေ ဖောင်ဖောင်ပြော။ စာအုပ်စာပေမှာလည်း ကိုယ်မလုပ်ရတိုင်း အလွန်အကြူးဖွဲ့ဆို။ ဖတ်တဲ့သူက အဟုတ်ထင်… ကိုယ်အလှည့်ကြတော့အဲဒီ အိုင်ဒီယာတွေအတိုင်း ကာယကံမှု ပြုမိရော။ စစ်အစိုးမရ အဆင်အစပ်ကလည်း လူထု ပြန်ခံပြော၊ ဝေဖန်ဆန်းဆစ်မှာ သိပ်ကြောက်တယ်။ ဒီတော့အစိုးရမီဒီယာတွေကနေ ဝါဒဖြန့်။ ရလဒ်အနေနဲ့ သောက်တလွဲတွေ ဖြစ်ကုန်ရော။
ပိတ်သက်ကျီး လိပ်ဝက်မြည်း
နယ်ကလာတဲ့ ကောင်လေးတွေမို့ လူဂျီးသူမ ရိုသေတာပါ ဆင်ခြေပေးသူရှိမည်.. အဲလိုဆို အဲဒီတောဓါးလေးတွေ ကလပ်ရောက်တဲ့အခါ တမီးလေးဒွေကို အကိုဂျီး၊ အူးလေးဂျီးတွေဖို့ ချန်ဖို့ သတိရရဲ့လား မေးချဉ်တယ်။ လှုပ်မနေနဲ့ ဘောကန်ဖို့ အားတောင်မချန် အဲဒီမှာ အကုန်သုံးပစ်မည့် သောက်ကောင်လေးတွေ..။
လူတွေ အငုံ့ဆိတ် အသွပ်သွင်းခံနေရတာပဲ ယဉ်ကျေးမှုလိုလို…။ ထောက်ပြတဲ့အခါ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ တံဆိပ်ခပ်.. လူတွေ လွပ်လပ်သွားမှာ၊ သခင်ဆိတ် ဝင်မှာ သိပ်ကြောက်..။ စာပြောင်ရေးတဲ့ အဏ္ဏဝါစုိုးမိုး ဟာသတခု အမှတ်ရတယ်။ မြန်တျန့် သင်္ဘောသားတစု သူတို့အပေါ်ကောင်းတဲ့ နိုင်ငံခြားသား ဧဂျင့် သင်္ဘောပေါ်လာစစ်တော့ကျေးဇူးတင်ခြင်း အထွဋ်အထိပ်အဖြစ် ကုန်းအူးခြကြတယ်။ အဘိုးကြီးက ဘလယ်ဒီဖူးလ် ဆဲဆိုပီး အားလုံးကို ဖြုတ်ပစ်လိုက်သတဲ့။ ငါကယ်ထားတာ မင်းတို့က ငါ့ကို ဘာသာခြား အယူသွင်းတယ်ဆိုပီး တင်းသွားလား မသိ။ ပြောချင်တာ ကိုယ့်ဖက်က လှုပ်ပုံလှုပ်နီး မဟုတ်ပုံ။ အခုလည်း ဗီယက်နမ်ပွဲ နိုင်တာ မင်းတို့တော်လို့ ထင်နေလား..။ ဒိုင်လူကြီး ကောင်းလို့လည်း မဟုတ်၊ ငှက်ကထ အူးဇော်ဇော်ငွေပုံအောလို့လည်း မဟုတ်၊ နည်းပြဦးကြည်လွင် ကောင်းလို့မလည်းမဟုတ်… ဘောလုံးကွင်းစောင့်နတ်က တဖက်ဂိုးသမားကို ချုပ်ပေးထားလို့။ နို့မို့ဆို ရှုံးအူးမှ…။
ဒီတော့အူးခြမဲခြ ကွင်းစောင့်နတ်ကြီးကို အူးခြရမည်။ ဂိုးမသွင်းဂင် ဂိုးသွင်းဂါနီး ဂိုးအသွင်းပီး ၃ကြိမ် အူးခြပါ။ မယုန် ဂဠုန် အကိုက်ခံရမည်။ ငယ်ကြေက် ထိုင်းကို နိုင်ခြင် ပြောတဲ့အတိုင်း လှုပ်ပါ… အိုးလေး လှုပ်ပါအူး ဟေ့ အိုးလေး လှုပ်ပါအူး..။
မြစပဲရိုး says: . ကြောင်ကြောင်ရဲ့
. သူတို့ ဟာသူတို့ ဦးချချင်လို့ ဦးချတာ။ ဒါကတော့ အပြစ် ပြောမရပါ။
. ကမ္ဘာ့ ပွဲ နဲ့ ကိုင်ပြီး ပြောရင် ဂိုးသွင်းလို့ ဝင်သွားတိုင်း ရင်ဘတ် ကို cross လုပ်ကြတဲ့ ဘောသမား များ ကို မြင်မြင် နေရတာ။
. ဒါကတော့ ကိုယ်သန်ရာ စိတ်ဓာတ်ခွန်အား ယူတဲ့ သဘောမို့ လုပ်ချင်လုပ်ပေါ့။
. ဒါပေမဲ့ မြန်မာ အသင်း နိုင်ဖို့ သူများ(သို့) တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင် ခေါင်းဖြတ် ယစ်ပူဇော်သလို လုပ်ကြ ရင်တော့ အဲဒါ မမှန်ဘူး လို့ ဆိုနိုင်တယ်။
စာမေးပွဲ ဖြေ တုန်း မေးခွန်းမဖတ်ခင် ဘုရားစာ ရွတ်ပါတယ်။
တကယ်ဘဲ နတ်သိကြား ကယ်လား၊ မကယ်လား မသိ။
ကိုယ့်စိတ်မှာတော့ ပါဝါကြီး သွားတော့တာဘဲ။
မသိတဲ့ မေးခွန်းဖြစ်ရင်တောင် စိတ်အေးအေးထားနိုင်ပြီး ငါ စဉ်းစားလို့ ရမယ်လို့ စိတ်ရောက်နေပြီးသား။
သိပ္ပံနည်း မှာလဲ ဘာအစွမ်းမှ မရှိတဲ့ ဆေးပေးလိုက်တာ တောင် ရောဂါပျောက်သွားတာ တွေ့ပြီး placebo effect လို့ နာမည်တပ်ထားသေး။
ဒီတော့ သူတို့လဲ သူတို့ ပါဝါ ကို သူများကို မထိခိုက်ရင် သူတို့ ကြိုက်သလို ယူပါစေလေ။
အလွန်အကျွံကန် ဖြစ်ပြီး သူများ သောက်မြင်ကပ်စရာ မဖြစ်စေဖို့ လေးသာ အသိထား ထိန်းဖို့လိုပါတယ်။
ဒါထက် ချစ်သော စု ရဲ့ စိနတိုင်းခရီး ကို မဝေဖန်ချင်ဘူးလား ကြောင်ကြောင်။
ဒီတစ်ခါ ဘာလို့ အသံပိတ်နေတုန်း ကွန်နစ်ကျီး ရဲ့။
. တကယ်ကြားချင်လို့ပါ။ :-))))
ဦးကြောင်ကြီး says: ခွစ်ယံဘောသမားတွေ ယင်ဗတ်ခရော့ စ်လှုပ်တာနဲ့ မတူဗူးဂျ။ ခုဟာက ကိလေသာ ထူဒဲ့ ပိတ်သပ်ကျီးကို အူးခြဒါ။ သိပ်ကန်ဒေါ့ဂျင် ဘုရားဆင်းတု ပင့်ထား အူးခြပေါ့။ ဒါမှမဟုတ် မဘသ ကိုယ်တော်တပါးပါး ကွင်းထဲပင့်ထား..။
ဘွားဒေါ် တလှုပ်ပီ သွားဒါတော့ ဆာမဖွဲ့ဒေါ့ဖူး လော်ဘီတီတီမြရေ..။ တလှုပ်ကျီးက လာဆိုမှလာ ရဒဲ့ ဘွစိုဒေါ့လဲ… သွားပေါ့…။ ဟိုကစားရိတ်နဲ့ပဲဟာ။။ တလှုပ်ပီ မသွားဂင်ဒဲက တလှုပ်တန်း မကြာခဏသွား ကြေးအိုးသောက်၊ ဝက်တုတ်ထိုး စားပြရမှာ…။ ခုတော့သွားလည်း စေတဏှာ မပါမှန်း သိပီ။
kai says: လူတွေ အငုံ့ဆိတ် အသွပ်သွင်းခံနေရတာပဲ ယဉ်ကျေးမှုလိုလို…။ ထောက်ပြတဲ့အခါ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ တံဆိပ်ခပ်.. လူတွေ လွပ်လပ်သွားမှာ၊ သခင်ဆိတ် ဝင်မှာ သိပ်ကြောက်..။ အ၀ါဂိုဏ်းရဲ့..ရိုက်သွင်းလွှမ်းမိုးမှုလို့ပြောချင်မိ…။
မြန်မာတွေလူညွှန့်ချိုးခံထားရသမို့.. ဒီလိုစိတ်တွေနဲ့.. ကမ္ဘာမှာနာလံထူဖို့ရယ်.. သိပ်မမြင်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ကိုယ့်တိုင်းပြည်အသင်းက ကိုယ့်ထက် ပိုကောင်းတဲ့အသင်းကိုနိုင်တယ်..
ပစ်စုတ်ပန်တည့်တည့်ရှု … အဲ့ဒါခုချိန်ထိ အမှန်တရားပဲ…
kai says: နိုင်ထားသမို့.. HR ပါဝါကသိပ်ကြီးနေချိန်.. သူတို့လုပ်တာ.. အဲဒါကနေ..ရိုးရာ.. ။
ရိုးရာကနေ.. ဓလေ့ထုံးစံဖြစ်သွားပါ့မယ်.. ကိုယ်တော်ရယ်…။
မတော်.. ဟို အလောင်းစည်သူမင်းကြီးလို.. ငါ့ထက်ညံ့တဲ့ဘိုးတော်.. ခေါင်းပြတ်စေဆိုပြီးသစ္စာဆို.. ထိုင်ကန်တော့မယ်ဆိုလည်း.. ဟုတ်သေး..။
ကွိ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ဘာဖြစ်တုန်းဗျ…. အလုပ်ပျက်အကိုင်ပျက်ခံပြီး လာအားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကို ဦးချတာ….
သူတို့အား သူတို့ စိတ်နဲ့ သည်အဆင့်ကန်လာနိုင်ခဲ့တာ…
ငဒို့လူမျိုး ငဒို့အားပေးသူတွေ ကို ဦးချတယ်…
ကွင်းထဲမတော့ တဖက်အသင်းကို နည်းနည်းမှခေါင်းငုံ့မခံဘူး….
မြစပဲရိုး says: ကိုင်း သူကြီး ရာ
“ကျွန်မ” တို့ လောင်းကြေး တစ်ခု လုပ်ရ အောင်။
သူကြီး က အစိမ်းရောင် တွေ ကို ဖယ်ပေး။ အဝါ ရောင် တွေ ကို ချန်ထား။
ကျွန်မ တို့ တိုင်းပြည် ကို ဆင်းရဲမှု တွေ က ပြီ ပျောက်အောင် တိုင်းပြည် ကို သူများ တွေ နဲ့ မှီ အောင် လုပ်ပြပေးမယ်။
ကျွန်မ “အဝါရောင်” တွေ ကို နိုင်ငံရေး ထဲ ဘာမှ မပါအောင် ဖယ်ပေးမယ်။ အစိမ်းရောင် တွေ ကို ချန်ထားမယ်။
သူကြီး မင်း က တိုင်းပြည် ကို ဆင်းရဲမှု တွေ က ပ ပျောက်အောင် တိုင်းပြည် ကို သူများ တွေ နဲ့ မှီ အောင် လုပ်ပေး။
ဘာ ကို ရွေးမလဲ။
ဦးကြောင်ကြီး says: အနှော်ကဒေါ့ အပြာရောင် လွှမ်းဆေဂျင်ဒယ်….
အစိမ်းရောင်ဆိုတာ.. အ၀ါရောင်ကိုသေသေချာချာလေ့လာပြီးမှ… အဲဒါကိုယူလုပ်တာလို့.. ပြောဖူးပြီးပြီ..။
ဟိုက.. အရှင်၊ ဘုရားထူးခိုင်းသလို.. သူက.. ဗိုလ်၊ ဗိုလ်ချုပ် အမည်တတ်ပြောခေါ်ခိုင်း..။
ဟိုက.. ကျုပ်နဲ့ပြောသလို.. သူက.. မင်း၊ငါနဲ့ပြော..။
ဟိုက.. တန်းမစီဖြတ်ဝင်သလို.. သူက..မိုးကျရွှေကိုယ် ဖြတ်ခေါင်းဆောင်လုပ်..။
ဟိုက.. အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမပြောခိုင်းသလို.. ဒီက.. ရေဘူးပေါက်တာမလိုချင်..ရေပါတာပဲလိုချင်လုပ်..။
အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာ.. ဘာသာရေးအယူကနေသွပ်သွင်းရတာမျိုး.. အရီးလတ်ရဲ့..။
ချခ်ျတွေအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်မှုကို ..ဆွဲချနိုင်လိုက်ရင်.. သက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်အလိုလိုပြုတ်ကျသွားပြီး..တိုင်းပြည်..ယဉ်ကျေးမှုအကုန်တိုးတက်သွားတာပဲ..။
အမေရိကားကို.. လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၂၀၀ကထောင်တော့.. အခြေခံဥပဒေအစဆုံးပြင်ရာမှာ.. ချခ်ျကို.. နိုင်ငံရေးကဆွဲဖြုတ်ဖယ်တာလို့.. သတိထားသိသင့်..လေ့လာသင့်တယ်..။
second amendment ကျမှ အမေရိကန်တွေရဲ့ နိုင်ငံသား.. အခွင့်အရေး..။
“Separation of church and state” (sometimes “wall of separation between ….. to state that “Congress was deprived of all legislative power over mere opinion, but …
Church and state in medieval Europe – Wikipedia, the free …
In this power vacuum, the Church rose to become the dominant power in the West. …. In England, the principle of separation of church and state can be found in …
‎Origins – ‎Historical events – ‎See also – ‎References
မြစပဲရိုး says: အခု “ကျွန်မ” ကိုယ် “ကျွန်မ” “ကျွန်မ” လို့ သုံး တယ်။
နောက် ပြီး လိုအပ် ရင် “ရှင့်” လို့ သုံးတယ်။
(ရှင် ဆိုတာ အရှင်, ခင်ဗျား ဆိုတာ သခင်ဘုရား ဆိုတာလဲ သိကြပါတယ်နော်)
ဘာဖြစ်လဲ သူကြီး ရယ်။
ကျွန်မ အခု ဒီလို ပြောတော့ ဘယ်သူ က ကျွန် လို သဘောထားလဲ။
ကျွန်က က “သူကြီးမင်း ရှင့်” လို့ သုံးတော့ ရော သူကြီးမင်း စိတ်ထဲ ငါတော့ အရှင် ဖြစ်ပြီ လို့ စိတ်ဝင်သွားသလား။
သေချာတာ က ကျွန်မ ဒီ လို အသုံးအနှုံး ကို ကိုယ့်စာပေ ထဲ ရှိနေလို့ သုံးတာ။
ဝန်ကြီး ကို လဲ ဒီလို သုံးမယ်၊ သူတောင်းစား ကိုလဲ ဒီလိုဘဲ သုံးမယ်။
ငါဒီ လို သုံး ရင် သူများ တွေ က တော့ ငါ ကို ဘယ်လို ဘယ်သို့ ထင်မယ်၊ နှိမ်တော့မယ် လို့ မတွေးပါ။
ကျွန်မ စိတ် က သူများ ကို ကြောက်တတ်တဲ့ ကျွန် ဘဝ လွတ်မြောက်နေပီးသား။
လူတစ်ချို့ က ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဝတ်အစားကောင်းကြီး တွေ ဝတ်ပြရတာ၊ ကားအကောင်းစားကြီး တွေ စီးပြရတာ၊ ရွှေငွေတွေ ညွတ်နေအောင် ဝတ် ရတာ၊ စကား ကို သူများ အထက် က စီး ပြောရတာ တွေ က
သူတို့ အတွင်း စိတ်မှာ သိမ်ငယ်နေလို့ ပါ။
သူတို့ စိတ်ထဲ ကျွန် စိတ် ရှိနေလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သခင်စိတ် ဇွတ်သွင်းပြနေရတာ မဟုတ် လား သူကြီးမင်း ရယ်။
ဒီတော့ အမူအယာ ရိုကျိုး တိုင်း ကျွန် လို့ မှတ်မရ တာလေး ပြောချင်ပါရဲ့။
မြစပဲရိုး says: မပူနဲ့ ကြောင်ကြောင်။
ထိုင်း က အပြာရောင် ထင်ရဲ့။ lol:-)))
မြစပဲရိုး says: ဟေ့ သူကြီး
တစ်ခြား မပြော နဲ့ကွယ်။
. လောင်းဖို့ ကို တစ်ခု ကြိုက်ရာ ရွေးပါလေ။ :-))))
ကထူးဆန်း says: ဒီ အလောင်း အစား က အကောင် အထည် မပေါ်နိုင် မဲ့ အလောင်းအစား ဆိုတော့ ကြည့်မကောင်းဘူး Was this answer helpful?LikeDislike 14469
kai says: လက်တွေ့ကျကျလေး.. ပြောကြည့်မယ်..။
ဒီနှစ်ထဲ.. ဒေါ်စုတို့ပါတီ.. မဲနိုင်များပြီး.. နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့.. ဥပဒေပြုရေးမှာ.. အာဏာအများစုရလာမယ်..။
အစိမ်းတွေ.. အာဏာပါဝါ.. လျှော့ကျကုန်တယ်ပေါ့…။
တကယ်ကြီးကို.. တိုင်းပြည်က.. ဆင်းရဲမှု တွေ က ပြီး ပျောက် တိုင်းပြည် ကို သူများ တွေ နဲ့ မှီ အောင် လုပ်လာနိုင်မယ်ထင်နေသလားမသိ..။
ဒီမိုး… ဒီလေ.. ဒီလူတွေနဲ့များ..
လက်၁၀ချောင်းနဲ့.. ၁ခါ.. ၂ခါ… ၃ခါ.. ၄ခါ… ၅ခါ… ကွိ…။
နောက်နှစ် ဒီအချိန်ကျ.. ဒီစာပြန်ဖတ်ကြည့်…။
နောက်၁၀နှစ်ကျ.. ဒီစာပြန်ဖတ်ကြည့်…။ Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဟုတ်ပြီ သူကြီး။
အာဏာ ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရမယ်၊ အစိမ်း တွေ အားလုံးနီးပါး ထွက်ရမယ်။
တစ်နှစ် နဲ့ တော့ ဘယ်လို ရ မလဲ သူကြီး ရဲ့။ နောက် ၁၀ နှစ်။
သူကြီး လက်ချောင်း ၁၀ချောင်း။
အဲဒီလို သဘောတူရင် DONE!!!
. ရှေ့ နောင် ၁၀ နှစ် ၂၀၂၅ ကျ ကျွန်မ တို့ ပြန်ပြီး review လုပ်မယ်။
အဲဒီလောင်းကြေး အတွက် ကျွန်မ ပိုပြီး ကြိုးစား ရမယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဟို ပုံပြင်လို ဖစ်နေမယ်…
ရှင့်ဘက်က ပါလာတဲ့ ကလေးးတွေ နဲ့
ကျမ ဘက်က ပါ လာတဲ့ ကလေးးတွေ ပေါင်းးးပြီးး
ရှင်နဲ့ ကျမ ရတဲ့ ကလေးးတွေ ကို အနိုင်ကျင့်နေပါတယ်တော့ ဆိုတာမျိုးးးးး
ဇီဇီခင်ဇော် says: ခု က စိမ်းး ဝါ ပေါင်းးပီးးး
ပြည်သူတွေ ကို ဖိတာပြောတာာာ
Ma Ma says: ကိုယ်ရဲ့အချိန်တွေ ငွေတွေသုံးပြီး အားတက်သရော လာအားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို တစ်ယောက်ချင်းစီ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း မနှုတ်ဆက်နိုင်လို့ ဦးချတာ အားကစားသမားတွေအနေနဲ့ သူတို့တာဝန်ကျေအောင်လုပ်တာမို့ မှန်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
မလတ်ရဲ့ အလောင်းအစားမှာ မလတ် ဘက်က တစ်မဲပါပါတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: အာ့ ဆို လည်းး အူးးမချဂျနဲ့… ..!!
ယိုးးဒယားး ကို နိုင်ဖို့ နာ ၁၃ ကြိုးး အစီအရင် လုပ်ပေးးမယ်…
ဟယ်.. နာ့ ၁၃ ကြိုးးမှာ မယ်ဝါးး ဘရာ ကြိုးးမရှိလို့ ၂ ကြိုးး ငှားးသွားးဒါ မေ့နေဒယ်….
၁၁ ကြိုးးပဲ ကျန်ဒေါ့ဒယ်..
ထိုင်းး ကစားးသမားး ၁၁ ယောက် ကို တစ်ကြိုးးစီ နဲ့ ချုပ်ထားးပေမယ်နော်..
မြစပဲရိုး says: LOL :-))))))))))))))))))))))))))))))
ဖလူ တွေ ကူးသွားပါဦးမယ် အေ။
Wow says: မြန်မာနိုင်ပီးရော ဘရာကြိုးမရှိချင်နေ ငှားထားတဲ့ ၂ ကြိုးပြန်ယူ… ဒါနဲ့ ကကြောင်က အူးချတာ မကြိုက်ဖူးဆိုတော့ ကင်မရာဘက်လှည့်ပီး ငေါ့ပြစေချင်တာလား… မှားလို့ ခေါင်းမော့ပြတာပေါပါဒယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: ငါ မေးးမို့ အေ့.!
Courage says: ဘာသာရေးမှိုင်းမိတယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြောရင်တော့ ဟုတ်မလိုလိုပေါ့ဗျာ။ ဒါမဲ့ ကျေးဇူးရှိလို့ (တနည်း) ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါးစာရင်းထဲ ၀င်သွားတဲ့သူမို့ ဦးချတာ (ကျွန်တော်ကတော့ ကန်တော့တယ်လို့ကိုပြောချင်တာ) အပြစ်မဆိုသာပါဘူး။ ဘာကြောင့်ဆို ၁၂ယောက်မြောက်ကစားသမား ဆိုပြီး ပရိသတ်ကိုပြောနေမှတော့ သူတို့ အားကြောင့် ကျေဇူးကြောင့်ဆိုတာ သိသာပြီးသားပါ။
ဘာသရေးတွေ အာပလာရေးတွေကိုဖယ်လိုက် သူတို့ ပရိသတ်ကို သူတို့ လေးစားလို့ ဦးချတယ် ဆိုတာကိုက လေးစားစရာပါ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ထိုင်းကိုနိုင်ဘို့ခက် ခဲဘာမယ်
အစစစ အရာရာ ထိုင်းကသာတာ မျက်မြင်ပါဘဲ
သို့သော် ဒီနှစ် ကံတရားက ဘမာဘက်မှာရှိနေသလိုပါဘဲ
Alinsett @ Maung Thura says: အူးကျောင်ဂို အူးခြဘာဒရယ်
အူးကျောင်မာ ချိဒဲ့ သာမီးလေးဒေထဲဂ အူးကျောင် မမြီးရတေးတဲ့
ပါကင်အတစ်sex sex လေးတီယောက်က်ု
ပါကင်ထုတ်ပြီး လင်ဗျံကြီးနဲ့ ထည့်
Mike says: .နေရာတကာ ဘာသာရေးကိုအားကိုးတာတော့ အကျင့်မဖြစ်စေချင်တာအမှန်…
.ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးစိတ် မွေးကြဖို့လေ့ကျင့်ပေးရမယ်
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဆိုတော့… အဲ့ပွဲတွေမှာ မြန်မာတွေ တစ်ယောက်မှ သွားမကြည့်ရင်… တစ်ကွင်းလုံး မြန်မာတစ်ယောက်မှ ရှိမနေရင်.. ဒီလိုပဲ နိုင်ဦးမယ်လို့ ယုံကြည်လား အူးကြောင် …
မွသဲ ( 17082011 ) says: နိုင်ငံခြားရောက်ပီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဗမာလူမျိုးဆိုတာမေ့ ကိုယ်ကမြင့်တယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံကလူတွေကိုနှိမ့်ချ အောက်တန်းကျတဲ့စိတ်နဲ့ စော်ကားချင်တိုင်းစော်ကားနေတာ နောင်ကို ဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက် ငါမြန်မာဆိုတာမပြောမိစေနဲ့။ ရှက်လွန်းလို့။ မြန်မာပြည်အတွက်ဆိုပြီးနောင်ကိုခေါင်းစဉ်တပ်ပြီးဘာအလှုမှမလုပ်ပါနဲ့။ ဘယ်တော့မှပါဝင်မှာမဟုတ်ဖူး လှုခဲ့မိတဲ့အလှုအတွက်လဲ နောင်တရမိပါရဲ့။ ဒီဆိုက်ရဲ့မန်ဘာအဖြစ်ဂုဏ်ယူခဲ့မိတာလဲနောင်တရမိပါရဲ့။ သဂျီးကိုကော ဦးကြောင်ကိုကော နှစ်ယောက်လုံးကိုပြောတယ်မှတ်ပါ
kai says: သေပြီဆရာ…
ဒီပို့စ်က.. ကကြောင်တင်တာပါ မွသဲရယ်..။
ကျုပ်ကတော့ ဗမာချစ်လွန်းလို့.. ညတောင်မအိပ်နိုင်..။
ဦးကြောင်ကြီး says: ဒီမှာ မဲသွပ်… ကောင်းစေခြင်လို့ အမြင့်ပေးတင်ဒါ ဖေးအင်တယ်စိုပီး ခုံမချခြင်ဆမ်းပါနဲ့…။ သောက်၃မကျလို့ မကျဗူး ဝေဖန်တာ မကြိုက်ရင် အလိုကျပြောပေးမဲ…။ ဒေါ်မဲသွပ်ကြီး ပြောသလို ငှဆဂါး နွားယ ဖြစ်ပါသီခမြှာ…။ ကဲ ကဲ.. မုန်းလို့ မလှူ … မလှူ လို့ မြန်တျန့် မဖစ်ရလေအောင် ဒေါ်မဲသွပ်ကျီး တဖက်ပိတ် လန်းစင်သာ ကောင်းပါသီ အယက်ဂဒို့..
မြစပဲရိုး says: အဲ့ တို့ချစ်ညီမ ပွဲကြမ်းနေပါရော့လား။
သူတို့ ပြောတာ တွေ ကို စိတ်မတိုစမ်းပါ နဲ့ ညီမသဲ ရာ။
သူတို့ က သူရို့ဟာသူရို့ ပိသလေး တွေလို့ မှတ်ပြီး ချိန်ခွင် ထဲ ဘက်လိုက် ညှိနေတာပါ။
ဒါပေသည့် ပြသနာ က အချိန်မစီး တဲ့ ပိသလေး တွေ ဖြစ်နေတာ။
ကဲ ပြောလိုက် ပေါက်ကွဲလိုက် တာ ကောင်းပါတယ်။
ဘာဖြစ်လဲ။ သူတို့ တောင် ပြောသေးတာ။
ဒါပေသည့် ရွာ ကို တော့ ပစ် မသွားပါနဲ့ လို့ တောင်းပန်ပါတယ်။
အလှူ အတွက်လဲ နောင်တ ရစရာ မလိုပါ ညီမ ရာ။
သူ့ ကို လှူတာမှ မဟုတ်တာ။
တကယ်ကို ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီး နေရာစရာ မရှိရှာ တဲ့ အဘိုးအဘွား တွေ ကို လှူတာဘဲ။ ဒင်းတို့လဲ သူတို့ ပြောချင်သလို ပြောပါစေ။
ဒင်းတို့ မလိမ်မိုး မလိမ်မာ နှစ်ကောင် ကို ဖြေးဖြေးချင်း အကျွတ်တရားရအောင် ဆုံးမ ကြတာပေါ့။
ဒင်းတို့ နှစ်ကောင် ကိုယ်စား အစ်မ တောင်းပန်ပါတယ်။
. ကျေနော်။ ရွာထဲ အစားလုပ်နည်းလေး နဲ့ ပြန်လာနော်။ :-))
ဦးကြောင်ကြီး says: အသာနေဆမ်းပါဗျာ…. ဟေ့ မဲသွပ်ကျီး.. ပျံမလာနဲ့.. နိဂို ရွာကို မလိုခြင်ဒေါ့ဖူး… သွား သွား ခု ထွက်သွား…
Ma Ma says: သူကပဲ သူကြီးလိုလို။ ညွသဲရေ ဒီရွာမှာ ဘယ်သူမှကြောက်စရာမလိုဘူး။ ကိုယ့်စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ရေးလို့ရတယ်။
လိုအပ်ရင် ၀န်းရံပေးမယ့် ညီအမတွေ ချွေးမတွေရှိတယ် မမေ့နဲ့လေ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: ချွေးမက လာမယ်။
မနေ့က တုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ ကြိုးတွေ ပြတ်ကုန်လို့ပြန်လိုက်ကောက်နေရတယ်။
မွသဲ ( 17082011 ) says: ပြည်တွင်းနေမြန်မာတွေကိုနှိမ်လွန်းလို့ပါအရီးနဲ့မမရယ်။ သိပ်များနေဘီ။ သီးခံနေတာအတော်များဘီ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားနေကြတာ ကြောင်ကသူ့ကိုသူဘာအောက်မေ့နေလဲမသိပါဘူး။ ကြောင်နှင်လို့မထွက်တော့ဘူး အရီးနဲ့မမရေ။ မဟုတ်ရင်ဂုဏ်ဖော်နေအုံးမယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ပြာသိုကာလ ကြောင်က ထ။
အကြီးကြီး ကြောင် လို့ ကြောင်ကြီးလို့ ဖြစ်သွားတာ။
သူ့ကို သများတို့မှ ပစ်ပယ်ရင်လေ သူ့နား ဝန်းရံသူမရှိဘူး ဆိုပြီး ဆူဆိုက်လုပ်သွားမစိုးလို့ ကြောင်ကြောင့်ကို သနားပါ မွသဲ။
တောင်ပေါ်သား says: ကျုပ်ကိုလည်း ကေအိုင်အေသူပုန်လို့ပြောလိုပြော ယောက္ခမခေါ်လိုခေါ်နဲ့
ဒီတစ်ခါ မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်မှန်းသိရင် မီးကင်ပြီး ဟိုက်ကလပ်နဲ့ မြည်းပစ်မယ် ၊
မြစပဲရိုး says: ဒါမှ တို့ မွသဲ ကွ။
. ညနေမှ ပြန်လာမယ်။
မြစပဲရိုး says: ဟား ဟား ဟား။
. ကွန်နစ် ကြောင်ကြောင် ရယ်။
ဒါ တိုက်ကွက် အကုန်ဘဲလား။
မွသဲ ဒင်း စကား ကို မယူ နဲ့။
ဒင်းက တို့ တွေ ကို အပ နည်း တိုက်ပြီး တောထုတ် နေတာ။
ဘာရမလဲ ကြောင်ရာ။ မင်း လောက်ကတော့။
မွသဲ။ မထွက် နဲ့။ မဟုတ်ရင် ရွာထဲ သူထင်သလို လျှောက် ညောင် နေလိမ့်မယ်။
မွသဲ ( 17082011 ) says: ဟုတ်တယ် အလဂါးကြောင် အဆံချောင်ကြောင် သင်္ကြန်အမြှောက်ကြောင်
kai says: မြန်မာတို့ စိတ်ဓာတ်ရေးရာတိုးတက်မှုကြီး၁ခု.. အဲ.. ၂ခုကို.. အနိုင်ရလိုက်ကြောင်း…
မြန်မာ-ထိုင်း ဗိုလ်လုပွဲအပြီးတွင် ပြည်သူ့ရင်ပြင်အတွင်း အမှိုက်ကောက်နေကြသော ပရိသတ်များ
aye.kk says: အိုးလဲမလှုပ်ပါနဲ့၊နာဂစ်ကြောက်လို့ပါ၊
အောင် မိုးသူ says: ရှုံးရှုံးနိုင်နိုင် ပြောင်းလဲလာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ပြီး ကျေနပ်တယ်။ အများကြီးမပြောတတ်ဘူး။